မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်း တောင်းတမိတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများထဲမှ အချစ်တတ်ဆုံး ယောကျ်ားသားများ (Part-1) | News Bar Myanmar
မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်း တောင်းတမိတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများထဲမှ အချစ်တတ်ဆုံး ယောကျ်ားသားများ (Part-1)
တကယ်လို့သင်သာ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ပုံမှန်ကြည့်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆို ဇာတ်လမ်းထဲကမင်းသားတွေလို ချစ်သူမျိုးလိုချင်မိတယ်လို့ စဉ်းစားဖူးမှာပါ။ တကယ်လို့ သူတို့တွေသာ သင်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝရဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အခုဖော်ပြပေးမယ် ယောကျာ်းသားအချို့ကတော့ မိန်းကလေးအများစု လိုချင်သော Ideal type နှင့်နီးစပ်တဲ့ သူအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
1. Jung Joon Hyun ( Weightlifting Fairy Kim Bok Joo)
Jung Joon Hyun ကသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Kim Bok Joo အပေါ်ချစ်မိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦးပါ။ ချစ်သူက အလေးမသမားဖြစ်ပြီး ကျားကျားလျားလျားနေတတ်တဲ့ ထုတ်ထိုးအိုးပေါက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်။
ဒါလေးတွေကိုပဲ သူ့မှာ စလိုက်၊ နောက်လိုက်နဲ့ ချစ်မဝဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပုံဟာ တကယ့်ကို အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာပါ မိန်ကလေးတွေ လိုချင်တဲ့ ကောင်လေးပုံစံမျိုးလေးပါ။
ကိုယ်မှကိုယ်၊ ကိုယ်ကလွဲပြီး အခြားသူတွေဆိုဖွဲစကွဲလို့ သတ်မှတ်ထားသူ၊ ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်စုံမှုတွေကိုပါ ချစ်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုး…တကယ့်ကို boyfriend material လေးပါပဲ။
2. Go Dong Man ( Fight for My Way)
ကလေးဘဝတည်းက အတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး အရွယ်ရောက်မှ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကနေ ၁၅ဝဝအချစ်ကို ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေး။
သူငယ်ချင်းဘဝထဲက Go Dong Man ဟာ Ara (အယ်ရာ) အပေါ်ဂရုစိုက်ပေးတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အချိန်တိုင်း Ara ဘက်မှာပဲ ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ချစ်သူဖြစ်လာတော့လည်း ငယ်ငယ်ကတည်းကပေါင်းလာတော့ အူမချီးခါးကအစအကုန်သိပြီး မတည့်အတူနေ Relationship တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်သာမက 1500အချစ်တွေကိုပါ Ara အပေါ်အပြည့်အဝ ပေးနိုင်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Go Dong Man ပါ။
3.Yoo Si Jin (Descendants of the sun)
စစ်သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Yoo Si Jin ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုသာမက ချစ်သူအပေါ်မှာပါ တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သော boyfriend တစ်ယောက်ပါ။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်သူအတွက် အချိန်အများကြီးမပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း တာဝန်တွေပြီးရင်တော့ ချစ်သူဟာ အမြဲပထမဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ချစ်သူဖြစ်သူ ကင်မွန်ယွန်တစ်ယောက် အသက်အန္တရယ် ကြုံတွေ့နေပြီဆိုလျှင်လည်း ရဲရဲ့ဝင့်ဝင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အားကိုးစရာယောကျ်ားသားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကိုယ်အတွက်အသက်တောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်က မိန်းကလေးတွေကို တကယ့်ကိုလုံခြုံစေပါတယ်။ Yoo Shi Jin လိုအချစ်မျိုးကလည်း တော်ရုံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
4.Do Kyung Seok (My ID Is Gangnam Beauty)
Do Kyung Seok ဆိုတာဟာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အချောဆုံးလို့ ပြောလို့ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်..အဲ့ကောင်လေးနဲ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးကို ပလစတစ်ဆာဂျရီလုပ်ထားတဲ့ Mirae (မီရယ်)ဆိုတဲ့ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ မျက်နှာကိုပလစတစ်ဆာဂျရီလုပ်ထားတယ်ဆိုရင် ကဲ့ရဲ့ချင်ကြတဲ့သဘောရှိလို့ မီရယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ လှလာပင်မဲ့ အမြဲစိတ်အားငယ်နေရတယ်။
Do Kyung Seok ကတော့ Mirae တစ်ယောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရလာပြီး၊ လူတိုင်းဟာသူ့အလှနှင့်သူရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်လာအောင် အနီးကပ်ကူညီပါရမီဖြည့်ပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာပြီး၊ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ပါ။
5.Gu Jun Phyo (Boys Over Flowers)
ဂူဂျွန်ဖြိုနဲ့ ဂင်ဂျန်ဒီဆိုတာ လူတိုင်းနှင့်ရင်းနှီးပြီးသား Legendary အတွဲတစ်တွဲဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။ ဂျစ်ကန်ကန်၊ ထင်တိုင်းကြဲတတ်တယ့် အကျင့်ရှိတဲ့ ဂုဂျွန်ဖြိုတစ်ယောက် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သလို ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။
အရာရာကို ငွေနှင့်ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်း သူသဘောပေါက်ခဲ့ရတယ်။ အချစ်မှာရယူခြင်းဆိုတာထက် ပေးဆပ်တာ၊ စွန့်လွှတ်ရတာကိုပါ သူသဘောပေါက်လာခဲ့တယ်။
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေထက် မေတ္တာစစ်တစ်ခုကသာ တန်ဖိုးရှိကြောင်း သိလာပြီးနောက် ချစ်သူကိုလုံးဝ အဆုံးအရှုံးမခံနိုင်တော့တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ချစ်သူအတွက်လည်း ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အချစ်တတ်ဆုံးအမျိုးသားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့အားလုံးကတော့ကယ့်ကို ချစ်တတ်တဲ့အမျိုးသားတွေပဲလို့ပြောရပါမယ်။ လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း ဒီလိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါမယ်။ ပရိတ်တွေရော ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကူးထဲကမှန်းထားတဲ့ ချစ်သူကရော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲ။ Comments section မှာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်နော်။
Next Kim Soo Hyun ရဲ့ College ကျောင်းသားဘဝမှ ဓာတ်ပုံများ ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာ »
Previous « ဟောလိဝုဒ်ကနေတောင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ ကမ်းလှမ်းခံရတဲ့ ကိုးရီးယား အနုပညာရှင် (၁၀) ဦး